समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन राजपा बैठक बस्दै «
समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन राजपा बैठक बस्दै
अध्यक्ष मण्डलको विवादित निर्णयबाट राजेन्द्र महतोलाई संयोजक बनाइएपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूले अध्यक्ष मण्डलको आगामी बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिन र महाधिवेशन तयारी समितिको गठनका लागि बस्ने बताएका छन् । नयाँ दिल्लीबाट पार्टीका निवर्तमान संयोजक महन्थ ठाकुर फर्के पनि बैठक भने अनिश्चित नै छ ।
राजपाका महासचिव केशव झाले मंसिर मसान्तसम्ममा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्ने बताएका छन् । पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेकोले अध्यक्ष मण्डलको बैठक सक्दो चाँडो हुनुपर्ने पार्टी नेताहरूको भनाइ छ ।
निवर्तमान संयोजक महन्थ ठाकुर निकट सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झाले पार्टीले जुनसुकै बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए । पार्टीमा खासै विवाद नभएको महासचिव झाको बुझाइ छ भने सहमहामन्त्री डा. झाले पार्टीमा असहज परिस्थितिको निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन् ।
डा. झाले भने, “अध्यक्ष मण्डलका चार नेताहरूको तर्फबाट यसअघि संयोजक पदलाई चक्रीय प्रणालीमा लाने निहुँमा गरिएका गैरराजनीतिक निर्णयहरू सच्च्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आफूले मानि आएको नेताको विरूद्धमा विभिन्न आरोप लगाउनु र एक संयोजकको पालामा गरिएको निर्णय अर्कोले फेर्दै जाने प्रवृत्ति राजनीतिक संस्कार होइन ।”
तर, महासचिव झाले भने विवाद नभएको दाबी गरे । उनले भने, “ठाकुरजी आफैंले जनकपुरमा विवाद नभएको बताउनु भयो । आफैंले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कसरी विवाद भयो ?”
पार्टीमा विवाद छ–छैन भन्ने विषयमा दुई नेता विभाजित भएपनि अध्यक्ष मण्डलको आगामी बैठक मुख्य दुई एजेन्डामा केन्द्रित भएर बस्न सक्नेमा सहमत देखिए । सहमहामन्त्री डा. झाले भने, “मधेशको सर्वोच्चको रूपमा ठाकुरजीलाई प्रमाणपत्र दिनु आवश्यक छैन । उहाँ लोकतान्त्रिक र स्वच्छ छविका सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ । तर जसरी आरोपित गरी संयोजक पदबाट हटाउने काम भएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ । त्यो सच्चिनु पर्छ । यसका लागि महाधिवेशनको तयारी समिति गठन गरी त्यसको नेतृत्व ठाकुरजीलाई दिनुपर्छ ।” सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिन पनि अध्यक्ष मण्डलको बैैठक बस्ने उनले बताए ।
झाका अनुसार यसअघि भएको अध्यक्ष मण्डलको निर्णय पुनर्विचार नगरी भएका गलत निर्णय नसच्याइए पार्टीले गति लिन नसक्ने पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूको भनाइ छ ।
महासचिव झाले पनि अहिले पार्टीका सामु दुई महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता र महाधिवेशन तयारी समितिको गठन सम्बन्धी निर्णय गर्नु आवश्यक भएकाले अध्यक्ष मण्डलको बैठक मंसिर २८ वा २९ गते बस्ने उनले बताए ।